faah faahin..Ciidamada Dowlada oo toogtey Afar ruux oo dhac kageysanayey suuqa bakaaraha ee M/Muqdisho. – Radio Baidoa
faah faahin..Ciidamada Dowlada oo toogtey Afar ruux oo dhac kageysanayey suuqa bakaaraha ee M/Muqdisho.
By Webmaster	 Last updated Mar 30, 2020
Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Soomaaliya iyo rag hubeysanaa oo la sheegay inay burcad ahaayeen ayaa waxaa ay is rasaaseyn ku dhex-martey Gudaha suuqa Bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano suuqa Khaliifa.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in ragga Burcada ahaa oo ku hubeysnaa Bustoolado ay dhac u geysanayeen dadka Shacabka ah,hayeeshee Ciidamada Dowladda ay kusoo baxeen,sidaasina ay israsaaseynta ku dhex-martey.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Ammaanka ay toogteen Afarta ruux ee la sheegay inay ahaayeen burcada,kuwaas oo Ciidamada la dagaalamey,waxaana intii ay socotay israsaaseynta istaagay isku socodka dadka iyo Ganacsiga.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in xaalada Suuqa Khaliifa oo ku yaalla Suuqa Bakaaraha oo ah halka ay israsaaseynta ka dhacdey ay tahay mid degan,isa markaana meydka Afarta Nin ee la diley ay qaadeen Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya.
Laamaha Ammaanka ee dowlada Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin dilka Afarta Nin ee hubeysneyd,kuwaas oo la sheegay inay dhac ka geysanayeen gudaha Suuqa Bakaaraha degmada Howl-Wadaag ee gobolkan Banaadir.
howlgallo lagu sgayo Amniga iyo ka hortaga Cudurka Coronavirus oo kasocda Putland.
Coronavirus oo ‘faraj’ u furay kalluumaysatada Kenya